कैलालीको घोडाघोडीमा चराको सङ्ख्या वृद्धि, यसवर्ष २९९ प्रजातिका चरा फेला ! - नेपालबहस
कैलालीको घोडाघोडीमा चराको सङ्ख्या वृद्धि, यसवर्ष २९९ प्रजातिका चरा फेला !
कैलाली । लोपोन्मुख चराको बासस्थान रहेको कैलालीको घोडाघोडी तालमा चराको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ । घोडाघोडी पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष दयाराम चौधरीले यसवर्ष तालमा २९९ प्रजातिका चरा फेला परेका जानकारी दिए ।
हरेक वर्ष विश्वभरि एकैसाथ जनवरीको पहिलो साता चरा गणना हुन्छ । “यसवर्ष तालमा विभिन्न प्रजातिका ५१ थप चरा फेला परेका छन्”, उनले भने, “गतवर्ष तालमा २४८ प्रजातिका चरा फेला परेका थिए ।” विश्वबाट लोप हुने अवस्थामा पुगेका १३ प्रजातिका चरासमेत ताल क्षेत्रमा पाइएका छन् । तीमध्ये ७१ चरा संरक्षण गर्नुपर्ने सूचीमा छन् ।
घाडाघोडी नगरपालिकामा रहेको उक्त तालमा नेपालबाट लोप हुने अवस्थामा पुगेका २८, संरक्षण गर्नुपर्ने सूचीमा रहेका ४१ र लोप हुने खतरामा रहेका दुई प्रजातिका चरा भेटिएका चौधरीले बताए । हरि हाँस, बगाले, वन कुखुरा र नागुन हाँसले बच्चा उत्पादन गर्ने थलोसमेत सो ताल बनेको छ । विश्वमा लोपोन्मुख तथा विरलै मात्र पाइने पक्षीले पनि ताल क्षेत्रमा बच्चा कोरलिरहेका छन् ।
विश्वमा ११ हजार १२६ प्रजातिका चरा पाइने भए पनि नेपालमा एक हजार ६७ प्रजातिका चरा पाइन्छन् । घोडाघोडी तालमा अन्यत्र नपाइने चरा पनि पाइने गरेको पक्षी संरक्षण हिरुलाल डगौराले बताए । उक्त तालमा ५६ प्रजातिका जलपक्षी समेत भेट्टिने गरेको तथ्याङ्क छ । अहिले विश्वबाट ४४ प्रजातिका चरा दुर्लभ, ३५ प्रजातिका चरा खतराको अवस्थामा, नौ प्रजातिका चरा लोपको अवस्थामा र आठ प्रजातिका चरा लोप भइसकेका छन् ।
रामसार सूचीमा सूचीकृत सो तालको क्षेत्रफल दुई हजार ५६३ हेक्टरमध्ये ३५२ हेक्टर तालको छ । उक्त ताल क्षेत्र विभिन्न लोपोन्मुख चराको वासस्थानका रुपमा विकास हुँदै गएको नगरपालिकाका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले बताए । “अध्ययनले रैथाने र आगन्तुक चराले यहाँ आफ्नो वासस्थान बनाउन थालेको बताएको छ”, उनले भने, “ताल क्षेत्रको विकासका लागि जिआइजेडको सहयोगमा गुरुयोजना निर्माणकार्य शुरु भएको छ, अब योजना बनाएर यहाँको विकास गर्छौ ।”
ताल क्षेत्रमा विसं २०६७ असारमा बगाले सिमकुखुराले वासस्थान बनाएर बच्चा कोरलेको थियो । यो घुमन्ते चराका रुपमा चिनिन्छ । तर यसले घोडाघोडीलाई वासस्थान बनाएको छ । यसले नेपालमा पहिलो पटक घोडाघोडीमा प्रजनन गरेको संरक्षणकर्मी बताउँछन् । चराविद् दयारामका अनुसार हिँउदको समयमा आउने आगन्तुक चराका रुपमा रहेको बगाले सिमकुखुरा रैथाने चरा हुन थालेको छ ।
उक्त तालको सूचक प्रजातिका रुपमा रहेको हरिहाँसले पनि प्रजनन केन्द्र बनाएको छ । विगत तीन वर्षयता हरिहाँसका लागि कृत्रिम रूपमा प्रजननमा सहयोग पुगोस् भनेर गुँड निर्माण गरेको छ । त्यो गुँडमा चरा आउने जाने गरे पनि प्रजनन भने नगरेको उनको भनाइ छ । सन् २०१३ मा विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत हुँदा हरिहासको सङ्ख्या एक हजार थियो । पछिल्ला वर्षमा यसको सङ्ख्या भने घटेको छ ।
चराको सङ्ख्या वृद्धि
Previous articleथपियो सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकमा नयाँ इन्टरनेट बैकिङ सुविधा !
Next articleपर्याप्त नसुत्दा कलेज तहका विद्यार्थीहरुमा मानसिक समस्याको खतरा !
पर्यटक भित्र्याउन पदमार्ग निर्माण, आवतजावत गर्न सहज
कोरोना फैलने त्रासले जलबिरे लामो झरना प्रवेशमा रोक
नेपाल पर्यटन बोर्डद्वारा पर्यटन प्रोटोकल तालीम शुरु
छाडा पशु संरक्षण कार्यले गिद्ध संरक्षणमा सहयोग